In waji qarisay ilaa iyo dhaqanka ah waxa kitaabkan ku-logu (Cutubka 2) iyo su'aalaha ay is waydiinayaan (Cutubka 3) -researchers ururiyaan xogta ku saabsan waxa si dabiici ah ka dhacaya dunida. Habka daboolay this cutubka-socda tijaabo-aasaas ahaan waa kala duwan. Marka cilmi-ordi tijaabo, ay si nidaamsan fara adduunka si ay u abuuraan xogta la haboon in ay ka jawaabto su'aalo ku saabsan xidhiidhada sababta-iyo-saamaynta.
Sababta-iyo-saamayn su'aalo yihiin aad caadi u ah in cilmi-bulsho, iyo tusaalooyin ka mid ah su'aalaha sida ma sii kordhaya mushaarka macallimiinta la kordhiyo barashada ardayga? Waa maxay saamaynta ee mushaharka ugu yar ee heerarka shaqada? Sidee tartanka shaqo ee a saameyn fursad iyada helitaanka shaqo? Waxa intaa dheer in su'aalahan si cad sababaha, mararka qaarkood keeni-iyo-saamayn su'aalo waa awaamiir dheeraad ah su'aalaha guud oo ku saabsan maximization of qaar ka mid ah ton waxqabadka. Tusaale ahaan, su'aasha ah "Maxaa button midabka kordhiyo doonaa deeqaha on website ah NGO site?" Run ahaantii waa su'aalo badan oo ku saabsan saamaynta mid ah midabo kala duwan button deeqaha.
Mid ka mid ah habka ay uga jawaabaan su'aalaha sabab-iyo-saameyn waa in la raadiyo naqshadaha ee xogta laga hayo. Tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo xogta laga kumanaan dugsiyada, aad xisaabiso laga yaabaa in arday badan dugsiyada in ay bixiyaan mushaaraadka macallimiinta sare bartaan. Laakiin, ma xiriir this muujinaya in mushahar badan keeni ardayda inay wax badan ka baran? Dabcan maya. Dugsiyada halkaas oo macalimiin dheeraad ah u helaan waxaa laga yaabaa kala duwan siyaabo badan. Tusaale ahaan, ardayda dhigata dugsiyada la mushaaraadka macallimiinta sare qoysaska hantiilayaal yimaado. Sidaas darteed, waxa u eg saamayn macalimiinta oo kaliya ka barbar noocyada kala duwan ee ardayda soo gaadhi kari waayeen. Kuwani waxay kala duwanaanshaha u dhexeeya unmeasured ardayda waxaa loo yaqaan confounders, iyo guud ahaan, waxaa macquul ah ee confounders wreaks jahawareer on awoodda cilmi inuu ka jawaabo su'aalaha sabab-iyo-saamaynta by raadinaya nidaamyada in xogta laga hayo.
Mid ka mid ah xalka dhibaatada of confounders waa in ay isku dayaan in ay is bar bar dhigo cadaalad ah qabsado, waayo, kala duwanaan arki karo oo u dhexeeya kooxaha. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad kala soo bixi macluumaadka canshuurta hantida ka tiro ka mid ah website-yada dowladda. Markaas, aad is barbar yaabaa waxqabadka ardayga ee dugsiyada halkaas oo qiimaha guriga la mid yihiin laakiin mushaaraadka macallimiinta way kala duwan yihiin, oo aad weli laga yaabaa in arday badan dugsiyada oo uu mushaar u macallin sare bartaan. Laakiin, waxaa weli jira confounders badan oo suurtogal ah. Waxaa laga yaabaa in waalidka ardayga, kuwaas oo ku kala duwan yihiin heerkooda waxbarasho ama waxaa laga yaabaa dugsiyada kala duwan ee ay soo dhawaataan in maktabadaha dadweynaha ama waxaa laga yaabaa dugsiyada la mushaharka macalinka sare sidoo kale waxay leeyihiin mushahar sare ee maamulayaasha iyo mushaharka maamulaha, ma macalinka mushahar, waa run ahaantii waxa sii kordhaya waxbarashada ardayga. Waxaad isku dayi kartaa in lagu cabbiro, kuwaas oo arrimo kale oo sidoo kale, laakiin liiska confounders macquul tahay muhiimad lahayn. Xaaladaha badan, waxaad kaliya ha qiyaasin karin iyo qabsato oo dhan confounders suurto gal. Habkan waxaad qaadan kartaa oo keliya ilaa iyo haatan.
Xalka wanaagsan in dhibaatada confounders waxaa socda tijaabo. Tijaabo awood cilmi u guurto ka baxsan Kol in si dabiici ah ka dhaca xogta si loo kalsoonaan karo ka jawaabo su'aasha sababta-iyo-saamaynta. In da'da analog, tijaabo inta badan ahaayeen Ma'aha adag oo qaali ah. Hadda, in da'da digital, caqabadaha saadka waxaa si tartiib tartiib ah engegay iska. Ma aha oo kaliya waa in ay u fududahay in la sameeyo tijaabo sida cilmi kuwa ku sameeyeen ee la soo dhaafay, haatanna waa suurto gal ah in uu ordo nooc oo cusub oo tijaabo.
In waxa aan ilaa hadda qoraal ah Waxaan yara dabacsan ee aan luqadda, laakiin waxaa muhiim ah in la kala saaro laba wax: tijaabo iyo tijaabo nasiibin gacanta. In tijaabo ah cilmi baare ka jira dunida ka dibna wuxuu cabbirayaa natiijada. Waxaan maqley habkan tilmaamay "perturb iyo dhawrtaan." Istiraatiijiyad Tani waa mid aad wax ku ool ah ee sayniska dabiiciga ah, laakiin in cilmiga caafimaadka iyo bulshada, waxaa jira hab kale oo ka shaqeeya ka wanaagsan. In tijaabo nasiibin gacanta cilmibaadhe intervenes dadka qaarkood oo aan dadka kale, iyo, adag, oo cilmibaadhis ku go'aansado oo dadka helaan faragelinta by randomization (tusaale ahaan, flipping qadaadiic a). Habkani waxaa ay hubisaa in tijaabo nasiibin gacanta ku abuuro barbardhigo cadaalad ah oo u dhexeeya laba kooxood: mid ayaa helay faragelinta iyo mid aan leeyahay. In si kale loo dhigo, tijaabo nasiibin gacanta ku yihiin xal u ah dhibaatooyinka of confounders. Inkastoo ay ku kala duwan oo muhiim ah oo u dhexeeya tijaabo iyo tijaabo nasiibin gacanta, cilmi bulsho inta badan ereyadan isticmaali badadanaa. Waxaan raaci doonaa heshiiska this, laakiin, at dhibcood qaarkood, Anigu waxaan kala jebin doonaa heshiiska in ay xoogga saaraan qiimaha tijaabo nasiibin gacanta ka badan tijaabo aan randomization iyo kooxda la xakameeyey.
tijaabo kala sooca lahayn ay gacanta waxa ay muujiyeen si hab awood leh si ay u bartaan oo ku saabsan dunida bulshada, iyo in cutubkan, anna waxaan idin bari doonaa badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo ee cilmi-baarista. In Qaybta 4.2, waxaan muujinaya doonaa macquulka aasaasiga ah ee tijaabo la tusaale u ah tijaabo ah on Wikipedia. Markaas, Qaybta 4.3, waxaan ku tilmaami doonaa faraqa u dhexeeya tijaabo shaybaarka iyo tijaabo ah berrinka iyo farqiga u dhexeeya tijaabo analog iyo tijaabo digital. Dheeraad ah, waxaan ku doodi doonaa in tijaabo beerta digital siin karaan qaababka ugu fiican ee tijaabo shaybaarka analog (control dhagan) iyo tijaabo beerta analog (xaqiiqo), oo dhan ee heer aan suurto gal ahayd hore. Next, Qaybta 4.4, waxaan ku tilmaami doonaa saddex fikradaha-ansax, heterogeneity of saamaynta daaweynta, iyo hab-in ay yihiin muhiim u dhigaayo tijaabo hodan. Iyadoo jeeda in, waxaan ku tilmaami doonaa ganacsi-offs ku lug labada xeeladaha ugu muhiimsan ee samaynta tijaabo digital: waxa aad naftaada u samayn (Qaybta 4.5.1) ama shuraako la awood (Qaybta 4.5.2). Ugu dambeyntii, waxaan soo gabagabeyn doonaa talo design qaar ka mid ah oo ku saabsan sida aad ka faaiidaysan karaan awoodda dhabta ah ee tijaabo digital (Qaybta 4.6.1) oo soo kala tilmaamaan qaar ka mid ah mas'uuliyadda in la iman in xoog (Qaybta 4.6.2). Cutubka oo loo soo bandhigi doonaa ugu yaraan sal xisaabta iyo luqadda rasmiga ah; akhristayaasha xiiso, hab rasmi ah xisaabeed si tijaabo waa in sidoo kale akhri lifaaqa Farsamada dhamaadka cutubka.